उत्तर कोरियाली नेता कीमको मृत्यु भए के हुन्छ? अर्को किम जन्मेलान्? – Hotpati Media
१६ बैशाख २०७७, मंगलवार १६:२७ मा प्रकाशित (5 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
सोल-उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता यति बेला सञ्चार माध्यम बाहिर रहेका छन् । उनी कहाँ अनि के गर्दैछन् कसैलाई कुनै जानकारी छैन ।
विगत दुई सातामा भएका महत्वपुर्ण राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा अनुपस्थित रहे पछि उनी बारे अनेक टिका टिप्पणीहरु बाहिर आउन थालेका छन् । यति सम्म की उनको मृत्यु भइसकेको समेत दावी गर्न थालिएको छ ।
सिएनएनसँगको कुराकानीका क्रममा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विदेश मामिला सल्लाहकार मुन चुङ इनले यो विषयमा आफुहरुको दृढ विश्वास रहेको बताए । ‘किम जोङ जीवित र स्वस्थ छन् । उनी अप्रिल १३ देखि उत्तरकोरियाको वोनसन क्षेत्रमा बसिरहेको भनिएको छ ।
के हुन्छ यदि उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनको मृत्यु भयो भने? अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपिले केहि प्रश्नहरु तथा तिनको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ ।
किम जोङ उनका बुबा तथा उनका हजुरबुबाको मृत्यु उनीहरुको मृत्यु भएको २ दिन पश्चात उत्तर कोरियाली राष्ट्रिय टेलीभिजनले प्रसारण गरेको थियो । उत्तर कोरियामा टेलिभिजन प्रस्तोताले घटना विशेष कपडा लगाउछन् ।
यदि राज्यका शासकको मृत्यु भएमा कालो कपडा लगाउछन् भने कुनै शुभ समाचार भएमा पिङ्क रंगको कपडा लगाउछन् । अत: यदि ति समाचार वाचकले कालो कपडा लगाएर क्यामरा अघि शोकको भावमा समाचार वाचन गरेमा किमको मृत्युको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
किम जोङ उनका ३ जना छोराछोरी भएको बताईन्छ । छोरा सानै भएका कारण उनलाई सत्ता सुम्पिने मनस्थितिमा किम नरहेको बुझिन्छ । किमका एक भाई छन् जो राजनीतिक गतिविधिमा निस्कृय रहेका छन् । निश्कृय भएका कारण उनलाई पनि शासन सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा किम छैनन् ।
किमकी बहिनी जो उनकी विश्वास पात्र पनि मानिन्छिन् । उनी किमका महत्वपुर्ण गतिविधिमा निरन्तर सकृय रुपमा सहभागी पनि भईरहन्छिन् । त्यसकारण किम उनलाई अबको शासन सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहान्छन् ।
किमका बुबा तथा हजुरबुबाको मृत शरिर पनि संग्राहलयमा सुरक्षित गरेर राखिएका कारण किम जोङ उनको शरीर पनि संग्राहलयमा नै सुरक्षित राखिने सम्भावना रहेको छ ।